तपाईको हातमा यस्ता रेखा छन् भने पैसा कमाउनु हुन्छ - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १५, २०७२ समय: १६:२१:३१
काठमाडौं । पूर्वीय दर्शन र धर्म ग्रन्थका अनुसार मानिसको जीवन उसले पाएको हस्त रेखाले निर्धाण गर्नै गदृछ । मानिसको पढाई, जीवनशैली, पारिवारिक सम्वन्ध, कमाई, बिबाह लगायतका बिषय ज्योतिषय रुपमा चल्ले गर्दछ ।हस्तरेखा विज्ञानले मानिसको सबै कुरा हातले निर्धारण गर्ने बताउछ । यी रेखा हाम्रो जन्मकै क्रममा बन्ने र यिनको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ । हामी धनी हुने व्यक्तिका हातका रेखा कस्ता हुन्छन् भन्ने बिषयमा चर्चा गर्न लागेका छौ ।समुन्द्रशास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको हातका औंलामा जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति निकै धनी र सुखी हुने वताइन्छ । समाजमा प्रतिष्ठित हुने र राजनीतिमा लागे सफल राजनीतिज्ञ समेत हुने हस्तरेखाले जनाउछ ।
अध्यात्मको दृष्टिले हातमा शंखको चिन्न हुनु निकै राम्रो मानिन्छ । यस्ता चिन्ह भएका व्यक्ति बुद्धीमानि हुने बताइन्छ । जुन व्यक्तिको चारओटा औंलामा शंखको चिन्ह छ त्यस्ता व्यक्तिको सरकारी उच्च पद प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै ५ औंलामा यस्तो चिन्ह हुनेले विदेश यात्रामा निस्कन पाउछ । साथमा विदेशमा राम्रो धन आर्जन गर्न सक्छ । जसको ६ वटा औंलामा शंख चिन्ह छ भने उ धर्मकर्ममा विश्वास राख्ने हुन्छ । साथमा उनीहरु आध्यात्मिक प्रवचनमा पनी तिक्ष्ण मानिन्छन् । १० ओटै औंलामा शंख हुने व्यक्ति माहात्मा हुन्छ भने ८ वटामा शंख हुने सुखी र धनी हुन्छन् ।
हस्त रेखामा हातमा हुने चक्रका बारेमा पनि चर्चा हुने गर्छ । जसको १० ओटै औंलामा चक्र छ, त्यस्ता व्यक्तिले संसार जित्न सक्छन् । त्यसैगरी एउटा मात्र चक्रहुने व्यक्ति विद्धान हुन्छन् भने २ वटा चक्र हुने सुन्दर देखिन्छन् । त्यसैगरी ३ ओटा चक्रहुनेहरु सुखी र भेग विलासमा रमाउने स्वभावका हुन्छन् ।नेपालसंदेशबाट
भोक्राहा नरसिंहमा होलि कार्यक्रम
भोक्राहा । होलि तथा फाल्गुन पूर्णिमाको अवसरमा सुनसरीकाको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्प...
भोक्राहा। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड न. २ अकाहा बजारमा रहेको जलेश्वर शिव मन्दिरले महाशिव रात्रिको अवसरमा ...
हराएको मूर्ति भेटियो
ललितपुरको सुनाकोठीस्थित बालकुमारी मन्दिरबाट हराएको मूर्ति फेला परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले खुमलटार...
पशुपति क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय बनाउने तयारी
राजा रणबहादुर शाहले कस्तो हुक्का तान्थे ? पशुपति क्षेत्रको पश्चिम ढोका सामुन्ने रहेको पशुपतिनाथ महास्नान घरमा राजा रणबहा...